Izmir Mobility Week Events | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirIzmir Mobility ကိုအပတ်ပွဲများစတင်
16 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
izmirde mobility ဖြစ်ရပ်များ၏အပတ်ကစတင်နေကြသည်
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ကျင်းပတစ်ချိန်တည်းမှာ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အများအပြားမြို့ပြ။ အဆိုပါဆောင်ပုဒ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးဖြစ်ရပ်များကျင်းပလိမ့်မည်အားပေးအားမြှောက်, တစ်ပတ်တစ်လျှောက်လုံးအချို့သောလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းအပေါ်အသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်သည့် "ကျနော်တို့လမ်းလျှောက်အတူတကွ" ဖြစ်ခဲ့သည်။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 22 1 တစ်ပြားမှစက်တင်ဘာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။
Izmir တဲ့ Metropolitan 16-22 စက်တင်ဘာလအကြားမြူနီစီပယ်, "Mobility ကိုအပတ်" နှင့်စက်တင်ဘာတွင် 22 "carfree မြို့ကြီးများနေ့" တွင်ဖုံးလွှမ်းလှုပ်ရှားမှုများဆက်တိုက်စည်းရုံးလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်စက်တင်ဘာလ 22 နှင့် 2019-1 အတွက် 21 စက်တင်ဘာလ 22 2019 ရာခိုင်နှုန်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုမှုအခကြေးငွေရက်စွဲ bis စက်ဘီးခွဲဝေမှုစနစ်ကအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးထက်ပိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖန်တီးဖို့တောင်တက်နှင့်သဘာဝ Izmir နှင့်စက်ဘီးစီးခရီးစဉ်တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။
Mobility ကိုအပတ်ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ်ကျနော်တို့ (Us အတူ Walk) လမ်းလျှောက်အတူတကွ "ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမူဘောင်အစီအစဉ်ကို "သဘာဝလမ်းလျှောက်" စက်တင်ဘာလ 17 အပေါ်ကျင်းပလိမ့်မည်ပါလိမ့်မည်။ ကလပ်ကိုမကြာခဏBalçovaကုထုံးလမ်းလျှောက် 18.00 များတွင်အသုံးပြုကြောင်းလမ်းကြောင်းများအတွက်ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားပါလိမ့်မည် Walking တော၌တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ 18 နှင့် 20 စက်တင်ဘာလထဲမှာ Karşıyaka ကျောင်း, Mavişehirမူလတန်း, အလယ်တန်းနှင့်Güzelyaliအကြောင်းအရာ ALP Özcanမသန်မစွမ်းပွားရေးစင်တာအလယျပိုငျးကျောင်းသားများနှင့်အတူသွားရောက်ကြည့်ရှုလိမ့်မည်။
လူမှု Mobility ကိုအပတ်, စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရပ်များတစ်ခုမှာ။ Google ကစက်တင်ဘာလမတိုင်မီ Play နှင့် Apple မှတဆင့် 16 "bikeprints" လျှောက်လွှာ downloads, Izmir ၌တည် bisikletsev, စက်ဘီးခြေနင်းအချက်လှည့်, မြို့ကိုသွားအချက်များဝင်ငွေနိုင်ကြောင်းနှစ်ခုအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဟုတ်မဟုတ်အားကစားနှင့်အွန်နေထိုင်သူများသူ့စက်ဘီးကီလိုမီတာအပေါ်တွက်ချက်ပါလိမ့်မည်နှစ်ဦးစလုံးဥရောပတိုက်တွင်အခြားမြို့များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်မည်အများဆုံးခြေနင်းလှည့်သောပထမဦးဆုံးမြို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ Izmir, 2017 52 အတွက်အလားတူပြိုင်ပွဲအတွက်မြို့မှာရှိတဲ့ဥရောပချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့သည်။
လက်နက် ပြု. သုံးစွဲဖို့လက်မောင်း Walking
22 "carfree မြို့ကြီးများနေ့" နှင့်ယခုနှစ်အပေါ်စက်တင်ဘာလကားကနေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရန်ထိုနေ့တွင်ပင် "ပွင့်လင်း Street, နေ့" အတိုင်းအတာအပေါ်ကျင်းပသောဥရောပတိုက်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦ, မြို့နေထိုင်သူများ၏အသုံးချအားပေးဖို့အစီအမံကို ယူ. , ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပိုသဘောသဘာဝ-ဖော်ရွေ Izmir ဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးကိုဖန်တီးရန်စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, Alsancak Bornova လမ်း 21 စက်တင်ဘာလ (1469 လမ်း) နှင့်စက်တင်ဘာလ 22 အတွက်သမ္မတနိုင်ငံ Boulevard ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုနေ့အဘို့အသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 21 မသန်စွမ်းလူများ၏ကြိုး entry ကို၏နယ်ပယ်မှလှုပ်ရှားမှုကိုလည်း Alsancak ဘူတာ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူလက်မောင်းအတွက်လက်မောင်း, တံခါးဝအထိလမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ် "အတူတကွကျွန်တော်လမ်းလျှောက်" ။
စက်တင်ဘာလ 21 အတွက်နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်စက်ဘီးစီးခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မည်။ စက်ဘီးခရီးစဉ်, İnciraltıများအတွက်အင်တာဗျူးနှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သူတို့ကမြို့ပြသစ်တောတွေ့လိမ့်မည် bisikletsev တစ်ဦးဆိုင်ကယ်စီး 18.00 အတွက်သမိုင်းဝင်ဓါတ်ငွေ့အဆောက်အဦကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ အင်တာဗျူးအတွက်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အဆောက်အဦပေါ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း (အဘယ်ကြောင့်စစ်ပွဲ Cycle) မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုစိစစ်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ 22 စက်တင်ဘာလ, သမ္မတနိုင်ငံလီ Cetinkaya ရိပ်သာလမ်းလမ်းဆုံနှင့်အတူလူကူး Boulevard ဘယ်မှာအများအပြားရပ်တည်ချက်ထိုဒေသတွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ အားကစားဧရိယာ, ပြပွဲဧရိယာစက်ဘီး, ကလေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဧရိယာ, လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီးပလက်ဖောင်း, Smothie ဆိုင်ကယ်, ဥယျာဉ်အားကစားပြိုင်ပွဲဧရိယာ, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Area နဲ့ Gundogdu မှန်ကန်သော entries တွေကို၏မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ယခုနှစ်အတွင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်မသန်စွမ်းလူဦးတက်ရောက်ခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
16-22 စက်တင်ဘာလကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောမြို့ကြီးတွေမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း "Mobility ကိုအပတ်" စက်တင်ဘာလ 22 က "carfree မြို့ကြီးများနေ့" ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ဥရောပ, လမ်းများ / အစိမ်းရောင်လမ်းများနေ့, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေ့, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျန်းမာရေးနေ့တှငျနထေိုငျ Mobility ကိုအပတ်တလျှောက်လုံးလူတွေ, စက်ဘီးစီးရက်, သန်းပေါင်းများစွာ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေ့ကဖြတ်ပြီး, ဖျော်ဖြေရေး / စျေးဝယ်သောနေ့ရက်, နှင့် carfree မြို့ကြီးများနေ့အမညျကိုအောက်မှာအမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံး။ de Izmir ပြီးခဲ့သည့်လေးနှစ်ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလ 22 အပေါ်ဥရောပတိုက်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ် "carfree မြို့ကြီးများနေ့" ထိုနေ့ "ပွင့်လင်း Street, နေ့" (ပွင့်လင်းလမ်းများကိုနေ့) ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုဆူညံသံညစ်ညမ်းမှု၏လမ်းများ, လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု Bundling, လူသွားလူအသွားအလာများနှင့်စက်ဘီးအသုံးပြုမှုကိုအားပေးဖို့, မော်တော်ယာဉ်မရှိဘဲအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကမြို့ကြီးများနေ့လမ်း carfree အသုံးပြုခဲ့တဲ့သတိပေးခံရဖို့, တိုင်းတာခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များကဲ့သို့အကျိုးအမြတ်ရရှိရန်မျှော်လင့်ရသည်။ မသက်ဆိုင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်အတန်းများနှင့်အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ရပ်များ၏, ထိုနေ့ရက်သို့မဟုတ်အသက်အရွယ်စဉ်အတွင်းလမ်းများတနေ့တစ်ပါတ်တွင်, လူတိုငျးအတှကျလိင်နှင့်ပျော်စရာ။
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ် 2019 တစ်နှစ်တာတင်ပြအစည်းအဝေး
Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası İçin…
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်မိုးသီးမင်ျဂ Konya အတွက်လွန်
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metro မသန်စွမ်းသူများအပတ်လှုပ်ရှားမှုများ